Mon, Apr 23, 2018 | 17:03:53 NST
पर्वत, मंसिर २८ –प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पर्वतमा २२ जना उमेदवारको धरौटी जफत भएको छ ।
कपिलवस्तु, मंसिर २८ – समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फ कपिलवस्तुमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ ।
लमजुङ, मंसिर २८ –प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा लमजुङबाट उम्मेदवार बनेका १९ जनाको धरौटी जफत भएको छ ।
रामेछाप, मंसिर २८ –पहिलो चरण अन्तर्गत रामेछापमा मंसिर १० गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावमा खसेको मतको झण्डै ३० हजार मत बदर भएको छ ।
नवलपरासी, मंसिर २८ –नवलपरासी पूर्वमा समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिएको छ । कुल १ लाख ६४ हजार ९५ मत खसेकोमा नेपाली कांग्रेसले सबै भन्दा धेरै मत प्राप्त गरी पहिलो दल बनेको छ ।
बैतडी, मंसिर २८ –प्रदेश नम्बर सातमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा एक सीट मात्रै जितेको छ । तुलनात्मक रुपमा प्रदेश नम्बर ७ नेपाली कांग्रेसको पकड क्षेत्र मानिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश भएकाले पनि ७ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको उपस्थित राम्रै हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर चुनावी नतिजाले त्यसो भनेन ।
डोटी, मंसिर २८– डोटीमा ११ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ । प्रतिनिधिसभा चुनावमा सहभागी भएका १७ जना उम्मेदवारमध्ये ११ जनाको जमानत जफत भएको छ ।
कैलाली, मंसिर २८ – प्रदेश नम्बर ७ मा प्रत्यक्षसँगै सामानुपातिकमा पनि मत गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
दैलेख, मंसिर २८ – चुनावको मतगणनाका बेला कतै ग्याभिन जाली भित्रको खोरजस्तो कोठाभित्र त कतै टेबुल, कुर्सी दराजलगायत फर्निचर राखेर दलीय प्रतिनिधिलाई टाढा राखिएका दृष्यहरु देखिए ।
दैलेख मंसिर २८ – दैलेखमा मत बदर हुने सङ्ख्या अघिल्ला चुनावहरुको तुलनामा बढेको छ ।
ओखलढुंगा, मंसिर २८– ओखलढुंगामा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा २५ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको छ ।
प्रतिपक्षलाई साथै लिएर अगाडि बढ्छौँ : एमाले अध्यक्ष ओली
सप्तरी, मंसिर २७ –संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश २ मा प्रत्यक्षतर्फ फोरम र राजपाको गठबन्धनले बहुमत ल्याएकोले गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
सर्लाही, मंसिर २७ –दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नं. १ मा नेकपा एमालेका तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष झलनाथ खनाल पराजित हुनुभएको थियो ।
काठमाडौं, मंसिर २७ –चुनावबाट प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ जना र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी संघीय संसदमा जम्मा २ सय ७५ जना सांसद चुनिन्छन् । संघीय संसद अर्थात प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच बर्षको हुनेछ ।
काठमाडौं, मंसिर २७ –एमाले नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकमा काम चलाउ सरकारले सात प्रदेशमा प्रतिनिधि तोक्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि सोलुखुम्बुबाट उम्मेदवार बनेकामध्ये विजेता र उपविजेता बाहेक सबैको जमानत जफत भएको छ । सोलुखुम्बुबाट १८ जना प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेकोमा १२ जनाको जमानत जफत भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार उम्मेदवार बनेका सोलुखुम्बुबाट १८ जनामध्ये १२ जना उम्मेदवारले निर्वाचन ऐन अनुसारको मत ल्याउन नसक्दा जमानत जफत भएको हो ।
मंसिर २६ –२७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० जना सांसद चुनिनेछन् ।
कपिलवस्तु, मंसिर २६ – कपिलवस्तु जिल्लामा २७ हजार ६ सय १७ मत बदर भएको छ । मत पत्रमा ल्याप्चे लगाउने, कोठा बाहिर छाप लगाउने, एउटै मत पत्रमा दुई मत चिन्हमा छाप लगाउने जस्ता मतपत्रहरु बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २७ –देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भएको पहिलो संसदीय चुनावमा बडो रोचक दृष्यहरु देखिए । गुन्डादेखि पुलिस पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति चुनाव लडे र केहीले जिते पनि ।
कपिलवस्तु, मंसिर २७ –कपिलवस्तुको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ का नवनिर्वाचित सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले कपिलवस्तुको खेतीयोग्य जमिन सिंचाईका लागि नौमुरे सिंचाई योजना सम्पन्न गराउन आफूले प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
भक्तपुर, मंसिर १७ –नवनिर्वाचित सांसद एवं एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले भक्तपुरलाई ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन आफूले पहल सुरु गरेको बताउनु भएको छ ।
खोटाङ, मंसिर २७ – खोटाङमा समानुपातिकतर्फ एमालेले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ ।
लमजुङ, मंसिर २७ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम अनुसार लमजुङमा नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
सुनसरी, मंसिर २७ – प्रतिनिधिसभा तर्फ सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार विजयी हुनुभएको छ ।
सुनसरी, मंसिर २७ – प्रतिनिधिसभा तर्फ सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को मात्र अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ ।
सर्लाही, मंसिर २७ – सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–१ सेखौनामा चुनावी परिणामको विषयलाई लिएर कांगे्रस र वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताबिच झडप भएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २७ – प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट जितेको नेकपा एमालेले समानुपातिकमा पनि अग्रता बनाएको छ । देशभरिबाट अहिलेसम्म ५० लाख मत गणना हुँदा नेकपा एमालेले १८ लाख १६ हजार ३ सय ३७ मत पाएको छ ।